OS X တွင်ကင်မရာမဟုတ်သော bug ကို fix ငါက Mac ပါ
Miguel အိန်ဂျယ် Juncos | | Mac OS X ကို, လဲ tutorial
အဘယ်သူမျှမစနစ်က၎င်း၏တစ်ခုလုံးကိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်, အချို့သောမတော်တဆမှုအမျိုးအစားများကိုအမြဲကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ သူတို့ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့နားမလည်ကြဘူး၎င်းသည်၎င်းတို့ထဲမှဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ပစ္စည်းထဲတွင်ပါ ၀ င်သောကင်မရာသည်ကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိပဲအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပေ။
PhotoBooth, FaceTime (သို့) ကင်မရာကိုသုံးသောအခြားပရိုဂရမ်များစသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွင့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောသောအမှားသတင်းတစ်ခုကိုစစ်ဆေးသောအခါရှင်းလင်းပြတ်သားသောလက္ခဏာတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ကင်မရာချိတ်ဆက်မထားပါ
ပြsoftwareနာကကွန်ပျူတာဆော့ဗ်ဝဲကနေဆင်းသက်လာတယ်ဆိုရင်၊ ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်စဉ်ကိုပိတ်လိုက် နောက်တဖန်ကင်မရာအုပ်ချုပ်ရေးတွင်ပြန်လည်ပတ်ရန်၊ ဤကိစ္စတွင် VDC လက်ထောက်ဖြစ်သည်။
Mac ကင်မရာကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းလမ်းနှစ်နည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် terminal ကိုဖြတ်သန်းသည် Utilities> Terminal ထဲ ၀ င်ပြီး 'kill' လုပ်ရန်အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ -
sudo killall VDC လက်ထောက်
၎င်းကိုတူညီသောလမ်းကြောင်းရှိ Activity Monitor မှတစ်ဆင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် Utilities> Activity Monitor ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ View menu မှာ 'All process' ကိုအရင်မှတ်သားရမယ်။ ဒါပေမယ့် process အားလုံး tab ရဲ့အဆုံးမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါ။
USB မှတဆင့်ဆက်သွယ်ထားသောကင်မရာများအတွက်လည်းဤအရာသည်သိပ်မများသော်လည်း၊ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ယာဉ်မောင်းကြောင်းစစ်ဆေးပါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖြစ်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာအပြောင်းအလဲကြောင့်ပြtheနာပေါ်လာရင်ကင်မရာအတွက် firmware update ရှိသလားစစ်ဆေးပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်အများစုဟာအဲဒါပဲ မျှသာပြproblemနာ ကင်မရာကိုအဆက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းသို့မဟုတ် Mac ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အချိန်မီဆုံးဖြတ်ခြင်း။ ထူးခြားသည်မှာဤမျှကြာမြင့်စွာကြာပြီးနောက်ယနေ့တွင် Mac သည်သင်၏ဝက်ဘ်ကင်မရာကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ခါတစ်ရံမတွေ့ရှိနိုင်သည့်အချိန်တွင်ဤပျက်ကွက်မှုသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး၊ - စနစ်၏နေ့စွဲဗားရှင်း။
ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန် Apple ၏ ဦး စားပေးမှုများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ Mac နဲ့ကင်မရာမရှိဘူး.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - OS X ရှိအသံစနစ်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » OS X တွင် 'ကင်မရာမချိတ်ထား' သောအမှားကိုပြင်ပါ
Lore Ast ဟုသူကပြောသည်
Lore Ast အားစာပြန်ပါ
Paula Mujica ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ FaceTime နှင့် Skype ကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်သောအခါကင်မရာကိုကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပုံရိပ်ဖမ်းယူသောအခါ၊ ချိတ်ဆက်ထားသောကင်မရာပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Paula Mujica အားပြန်ပြောပါ
Mikhail Aliosha ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ လုပ်ငန်းစဉ်မရှိဘူး၊ ငါ့ကို OS El Capitan ရှိတယ်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား?
Mikhail Aliosha အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော့်အတွက်မဟုတ်ပဲ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ memory ကို ၀ ယ်ရင်ဝယ်လိုက်တာပါ။ Yosemite Pre-system upgrade လုပ်တာကပျက်သွားတာပါ။
Skype ပါတဲ့ကင်မရာသုံးချင်ရင် Windows Laptop ကိုသုံးရတယ်။
ငါသည်လည်းအယ်လ် Capitan ရှိသည်။
ငါ Yosemite မတိုင်မီကတည်းကတူညီတဲ့ပြproblemနာရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် iMac ကို ဖြတ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာများမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးစေသည့်ငွေများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်၊ ထိုအရာများနှင့်အတူလာသည်။ ဘယ်စနစ်မှမပြီးပြည့်စုံဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊
ငါသည်လည်းယခင်မှတ်ချက်ကဲ့သို့ El Capitan, update လုပ်ပါပြီ။
ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။ အင်တာနက်မှာတွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်၊ စပိန်ဘာသာတွေနဲ့ရှာဖွေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူး
မာ့ခ် Mtz ။ ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ငါဒီဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ပြီးပြီ၊ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ဆောင်းပါးအတော်များများကိုလည်းဖတ်ပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က Mac အတူတူဒီပျက်ကွက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူမှ Apple Store ကိုမသွားဘူး
Marcos Mtz အားပြန်ကြားပါ။
ငါ terminal မှနှင့်မော်နီတာကနေနှစ် ဦး စလုံးကြိုးစားခဲ့ပြီ, လမ်းမရှိသော။
ငါ့မှာအဆင့်မြှင့်ချင်တဲ့ MacBook Pro ရှိပြီးငါအရမ်းကြောက်တယ်🙁
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ OsX el Capitan နဲ့ ၂၀၁၂ က Imac ၂၁.၅ ဖြစ်တယ်။ ယနေ့ငါအလင်းရောင်မီးသီးဖိုက်ဘာကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကခဏအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီပုံဟာလုံးဝအနက်ရောင်ဖြစ်နေတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့အတူတူပဲငါကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ငါ့အတွက်တော့အကျိုးမရှိခဲ့🙁
Moraima Clemente ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရမ်းကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။ El Capitan နဲ့ Macbook pro လည်းရှိတယ်၊ Skype ကကင်မရာကိုသုံးလို့မရဘူး၊ VDCAssistant လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတင်းအကျပ်ပြီးတော့ကင်မရာအလုပ်လုပ်တဲ့ application ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ အခုတော့ငါမသိသေးဘူး။ အကယ်၍ ၎င်းကိုလုပ်ပြီးနောက်၎င်းသည်ဆက်လုပ်နေမည်၊ သို့မဟုတ်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါက၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်မှတ်ချက်အတိုင်းအဖြေမတွေ့ရသူများကိုကံကောင်းပါက၊ ပစ္စည်းကိရိယာများသည်စျေးကြီးပြီးကင်မရာဖြင့်ထွက်လာမည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်လုပ် !!! ဒါဟာငါ့ကိုနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုပေးခဲ့တယ်!
Moraima Clemente အားစာပြန်ပါ
Enrique Vallejo နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ဤရွေးချယ်မှုကပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ နှစ်ရက်ကြိုးစားပြီးနောက်မှာ၊ ငါ Mac ရဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းမှာတင်ပြခဲ့တဲ့ software ရဲ့ update ကိုငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ update ကိုနောက်မှလိုက်တယ်။ mac ကသူ့ဟာသူ rebooted ပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းတယ်။
Enrique Vallejo အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်တဲ့အခါ VDCAssistant ကကျွန်တော့်ကိုစကားဝှက်တောင်းခဲ့တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Luis Aleidy ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ၂၀၁၄ macbook လေ ၀ င်နေပါသည်။ ကင်မရာသည်အစတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်မက်ဆေ့ခ်ျရရှိခဲ့သည် (ကင်မရာမတပ်ဆင်ထားပါ)၊ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါဤနည်းလမ်းနှင့်အတူနောက်တဖန်ကံကောင်းပါစေဘူး။ OS Sierra ကိုပိုပြီး update လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ထပ်တူပြproblemနာရှိနေသေးတယ်။ Mac အသုံးပြုသူများသည်ဤပြwithနာနှင့်အတူနေရမလား?
Luis Aleidy အားပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ Sierra နဲ့ 2013 ခုနှစ် macbook ရှိတယ်။ ငါသတိထားမိသည့်ပြproblemနာတူညီသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ sudo killall ထားလိုက်တဲ့အခါ။ ။ ငါမှားယွင်းတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုရတယ် - မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမတွေ့ရဘူး၊ "မျက်နှာပြင်ချိတ်ဆက်မှုမရှိ" မှာအားလုံးရှိနေသေးတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemနာဖြစ်နိုင်မလား။
Luis Oscar ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က Macbook pro ရှိတယ်။ ငါမှာထပ်တူပြproblemနာရှိတယ်။ ကင်မရာကအသုံးပြုတဲ့နေရာအားလုံးမှာပြတ်တောက်သွားသလိုပဲ။ ငါ "sudo killall" ကိုကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် ။ ။ » ဒါပေမယ့်စကားဝှက်ကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟာ "လိုက်ဖက်တဲ့ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုကိုရှာမတွေ့ဘူး" ဆိုတဲ့အမှားပြတဲ့အချက်ပြလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာရှေ့လမ်းမရှိဘူး။ မဆိုအကြံပြုချက်?
Alan Hugo ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ့မှာကင်မရာရှိတယ်၊ ငါ့ macbook ကမတွေ့ဘူးလား။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
Terminal option မှာပြောခဲ့သလိုပဲပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Julieth Ramos ဟုသူကပြောသည်
ငါခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းပြီးလိုက်ပြီ။ ကျွန်တော့်မှာ MacBook Pro (၁၃ လက်မ၊ Late 13) ရှိပြီး၊ MacOsSierra 2011 အထိစနစ်ကိုမကြာသေးမီကမွမ်းမံခဲ့သည်
Julieth Ramos သို့စာပြန်ပါ
ဟယ်လို! ငါ့မှာ Macbook Pro (MacOs Sierra 10.12.4) နဲ့လက်ပ်တော့ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ Skype ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြတ်တောက်သွားတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီကင်မရာကလုံးဝအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အထိဆက်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ အဲဒါကိုထပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
ဟုတ်သည်၊ အိုင်တီအလုပ်လုပ်သည်။ ငါပထမရွေးစရာကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ အခုငါကင်မရာထဲဝင်လို့ရပြီ။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ MACs တွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင် operating system အကြားအိုမင်းရင့်ရော်မှုမရှိခြင်း (သို့) သဟဇာတဖြစ်ခြင်းကိုပရိုဂရမ်ဆွဲထားပြီးပါပြီ။ Mac ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီဖို့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့အဆင့်မြှင့်မှုတွေကအသုံးမပြုနိုင်တော့တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ပြီး ၀ ထဲမှ ၀ င်လာပါလိမ့်မယ်။ ၊ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိသော Mac ရှိသူများသည်ချွေတာရန်ကြာသော်လည်းမကြာသောကြောင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ မင်္ဂလာပါ။
ကောင်းတယ် !! ငါ terminal ကိုမှတဆင့်လုပ်ခဲ့တယ် rebooted နှင့် voila!
Jorge Noreña ဟုသူကပြောသည်
ပထမဆုံး terminal option ကပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေဘယ်လိုလဲငါတော်တော်များများအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ Sierra system ပါ ၀ င်တဲ့ 2011 MacBook Air ရှိတယ်။ ငါ Terminal ကနေတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုကြသောအခါသူကငါ့ကိုပြောပြတယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကဖြေရှင်းချက်ကိုသိပြီး၎င်းကိုမျှဝေနိုင်ပါကကျွန်ုပ်သဘောကျမည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!! ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟယ်လို! ငါ့မှာ Os Sierra ဗားရှင်း ၁၀.၁၂.၆ နဲ့ MacPro ရှိတယ်၊ ကွန်ရက်ကင်မရာကငါ့ကိုမသိဘူး။
ငါအခြားအရာများအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မည်ကိုကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အ system ကို updated ကြပြီမဟုတ် ... ဒါပေမယ့်အထက်ပါညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူငါဒီမက်ဆေ့ခ်ျကိုရ
Radhika ဒေဝီ ဟုသူကပြောသည်
စူပါ! ငါဒုတိယဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဖြေရှင်းချက်ကချက်ချင်းပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားအရမ်းကြင်နာတယ်။
Radhika Devi အားစာပြန်ပါ
Memo Garcia ဟုသူကပြောသည်
facetime ကင်မရာကိုမတွေ့ရပါ။ terminal solution သည် ၄ ​​င်း command အတွက်မည်သည့် process ကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။ system monitor တွင် vdcaAssistant ကျွန်ုပ်တွင် Mojave နှင့်အတူ MacBook Air 11 ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်သည်ကတည်းက Mojave နှင့်အတူကျွန်ုပ်ထင်သည်။ စနစ်သစ်ဖြင့်ဖြေရှင်းသော်လည်း၎င်းကဲ့သို့မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အမြင့်ဆီယာရာနှင့်အလုပ်လုပ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
Simone နှင့် mariaje ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်နှင့်လည်းအတူတူပါပဲ
ငါ့မှာ Captain ရှိတယ်။ killall ကိုရေးတဲ့အခါစကားဝှက်ကမှားနေတယ်။
ငါကအခြားနေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါကပိတ်ထားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထပ်တူပြproblemနာရှိပြန်သည်၊ သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်မူဘာမှမပြင်ဆင်တော့ပါ။
ငါလှုပ်ရှားမှုမော်နီတာတွင်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ထိုတွင် killall သို့မဟုတ် VDCAssistance တွင်ဘာမျှမပေါ်လာပါ။
ဒီ macs တွေဟာဒီလောက်မအောင်မြင်ဖို့စျေးကြီးလွန်းလို့မပြင်နိုင်ဘူး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! <3 ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး !!!! ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ MBP ကင်မရာကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကူညီသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!!
သင်၏ညွှန်ကြားချက်များသည် Mac စာအုပ် 2011 တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် MacBook Air 2011 (High Sierra) ရှိပြီးအဆင့်အားလုံးကိုကြိုးစားပြီးသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ တကယ်တော့ configuration နှင့် privacy အတွက်ကင်မရာလည်းပေါ်မလာပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ မထည့်သွင်းပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ။ !!!
Alejandra Renaux ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သော်လည်း၎င်းကိုမကြာခဏပိတ်ထားသည်။ အဲဒါကိုဘယ်လို fix နိုင်သလဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတစ်ခါတစ်လေတစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ်လောက်ဒီ command တွေကိုရိုက်ရတယ်။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့လား။
Alejandra Renaux အားစာပြန်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ terminal ကိုထည့်ပြီး system ကို restart လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တွင် MacBook Pro ရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ^ __ ^
Karolin Yisset ဟုသူကပြောသည်
Karolin Yisset အားပြန်ပြောပါ
LTE ဖြင့် Apple Watch ကိုထုတ်လုပ်မည်လား။